Paositra Malagasy: mampiasa ny teknolojia niomerika | NewsMada
Paositra Malagasy: mampiasa ny teknolojia niomerika
Nankalazaina, ny talata 9 oktobra teo tany Mahajanga, ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Paositra. Maro ny hetsika natao nanamarihana azy, toy ny fanentanana, ny fampirantiana karazana hajia malagasy marobe, sy ny maro hafa, hampiroboroboana ny sehatry ny paositra eto Madagasikara. Ifarimbonan’ny mpiasa madinika indrindra izany hatrany amin’ny mpitantana ambony. Nambaran’ny tale jeneralin’ny Paositra Malagasy, Rakotomalala Augustin, fa « nosafidina nankalazaina tany Mahajanga ity hetsika ity satria aman’alina ny tanora malagasy avy any amin’ny faritra 22 mihaona any amin’izao fotoana izao ».
Manaraka ny fivoaran’ny Teknolojia niomerika ny Paositra Malagasy, hanatsarany ny tolotra ho an’ny mpanjifa. Araka ny toromariky ny Fiombonan’ny paositra iraisana maneran-tany (UPU), sokajina ho asa ho an’ny vahoaka ny tolotry ny paositra ka tokony ho natao ho an’ny rehetra, hatrany amin’ny toerana lavitra.
Mahafeno izany fepetra izany ny Paositra Malagasy, ahitana masoivoho 250 manerana ny Nosy, manana mpiasa maherin’ny 2 000. Faharoa aorian’ny zandarimaria ity sampandraharaha ity amin’ny fanakaikezana ny vahoaka. Nanamafy ny tale jeneraly lefitry ny Paositra Malagasy, Rakotoarivelo Ami, fa tena ampiasaina tokoa ny tolotry ny paositra, indrindra any amin’ny toerana lavitra.
Araka ny voalaza etsy ambony, miditra tsikelikely amin’ny fampiasana ny niomerika izy ireo, toy ny ny e-mandat, fandefasana vola eto an-toerana, sy ny Postransfer, ho an’ny fifanakalozam-bola iraisam-pirenena.